Cryptocurrency kwemigodhi zviri pamutemo kuCanonical | Linux Vakapindwa muropa
Kungofanana neMicrosoft nevagadziri vayo gakava rePrivate Software, zvinoita sekunge Canonical ine basa rakafanana mukati meMahara Software. Mazuva mashoma apfuura, malware akawanikwa mune yepamutemo snap package chitoro. Izvi zvaireva kuti zvimwe zvikumbiro zvinogona kutsamwisa mashandiro emakomputa edu pamwe neInternet kubatana.
Neraki, iro rekusimudzira chitoro timu yekuvandudza yakaribata nekukurumidza uye vakakwanisa kubvisa kunyorera hutachiona, asi zvaive zvakakwana here? Vazhinji vashandisi Vakumbira kuchengetedzwa kwakawanda uye Canonical yapindura kuti muzvikumbiro zvakabviswa havasi malware kana zvisiri pamutemo sezvo cryptocurrency kuchera kuri pamutemo.
Kunyange zvakadaro iyi kesi haienderane neyakareruka kunyorera kucherwa asi kune malware akashanda tisingadi. Uye ndicho chikonzero nei Canonical yairuramiswa nekubviswa kwezvikumbiro uye ndicho chikonzero nei tichigona kupatsanura izvo zvinoshandiswa kana kuti panzvimbo pazvo idzi shanduro dzeaya maapplication semarware kwete semahara software.
Asi kunyangwe zvakadaro Canonical yakurumidza kuita uye hutachiona hauna kupararira, njodzi uye gakava nezve mapakeji epasirese hazvina kudzivirirwa uye vashandisi vazhinji vatosimudza alarm nezvazvo. Iyo snap app chitoro haina vaongorori asi panzvimbo pezvo ine software inotarisa mamwe ma paramita e snap mapakeji uye izvi zvinoreva kuti mutsetse mushure memutsetse wekodhi hauna kuongororwa uye kodhi yemashandisirwo asiri Mahara Software inoonekwa. Chii chimwe, snap mapakeji aripo mukugovera kwakawanda uko kusingabvi paUbuntu saFedora kana Solus, izvo zvinoita kuti gakava nenjodzi zviwedzere.
Kusiya kukakavadzana uye hukama hweCanonical nayo, tinofanirwa kutaura kuti kana ikashandiswa zvine hungwaru, chero mhando yekuisa yakachengeteka, zvikasadaro fomati haina basa. Kana isu tichida kuti izvo zvakaitika nemapapeturu asingazvidzokorore pachawo, tinofanirwa kushandisa njere uye usashandise mapakeji kana zvinyorwa zvatisingazive.
Usambofa wakapa midzi mvumo asi uvabvunze uye kana uchinge uchinyumwira zvakanyanya kana uine software yakakosha, zvinogara zvakanaka gadzira muchina chaiwo kana wega komputa kuti ushande semubhedha wekuyedza. Kunyange zvakadaro, shandisa pfungwa shomanana. Iye anovandudza akabatwa necryptocurrency kuchera haasati ataura, asi chimwe chinhu chinondiudza kuti haazonyarari Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Cryptocurrency kwemigodhi zviri pamutemo kuCanonical
Sei zvicherwa zvisiri pamutemo? Ndiani ubuntu kana chero munhu kuti asimbise chinhu chakadai ... j
Hapana kambani iri chero munhu anosarudza kana chimwe chinhu chiri pamutemo kana zvisiri pamutemo, icho chinotemerwa nenyika / nyika uye mukati mayo chete, saka zviri nyore sekuhaya michina kune imwe nyika uye yakagadziriswa.